App hanovana sary: ​​ireto no tsara indrindra azonao atao | Famoronana an-tserasera
Tsy mitovy ny fakantsary sy fakan-tsarimihetsika. Fa tsy matetika ny mitondra fakantsary ary koa finday, ary farany mampiasa an'ity faharoa ity izahay haka sary. Ny olana dia tsy azo ampitahaina amin'ny gadget mifantoka amin'ny sary ny kalitaon'ireto. Na izany aza, izany no ilana fampiharana fanovana sary. Ary, raha tsy fantatrao, amin'izao fotoana izao dia misy fampiharana marobe izay hanatsarana ny sarinao ary hahatonga azy ireo ho tsara tarehy kokoa, ary mahatalanjona mihitsy aza.
Raha raisina an-tsaina fa mihabe ny finday dia tsy vitan'ny hoe mandray kaontenera matanjaka, fa koa fakan-tsary avo lenta, tsy mitombina ny fisian'ny rindranasa sasany hanovana sary amin'ny finday. Amin'izao rehetra izao dia ao amin'ny Google Play na Apple Store, Inona avy ireo fampiharana tsara indrindra hanovana sary? Androany izahay dia nanao fanangonana ho anao.
1 Ireo no fampiharana tsara indrindra hanovana sary
1.1 App hanovana sary: ​​Pixlr
1.2 Sary mikorisa
1.8 Fampiharana fanovana sary: ​​Hypocam
1.10 App hanovana sary: ​​Photo collage
1.11 App hanovana sary: ​​Visage
Ireo no fampiharana tsara indrindra hanovana sary
Fantatsika fa ny sary dia mitaky teny arivo. Ary koa io sary alainao amin'ny fotoana iray io, rehefa hitanao izany any aoriana, dia mamerina ny fahatsiarovana sy ny fahatsapana tamin'io fotoana io. Noho izany, laharam-pahamehana ny fahazoana ny kalitao tsara indrindra, nefa koa avereno ireo lesoka ireo izay, amin'izao fotoana izao, tsy hitanao izany. Ny sary tsy dia mifantoka loatra, ny sary manjavozavo, manjavozavo, ny maso mena mampatahotra, na ny tsy fitovizan'ny hazavana aza dia mety hanimba ny sarinao. Hatramin'izao.
Ireto misy fampiharana fanovana sary tokony hananana aloha sy aorian'ny galerianao. Ankoatr'izay dia ho tonga lafatra amin'ny fampidirana tambajotra sosialy (Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter ...) izy ireo ny "endrika" tsara indrindra amin'ireo sary ireo.
App hanovana sary: ​​Pixlr
Pixlr dia mpamoaka sary mahery vaika ary tsara indrindra, maimaim-poana. Midika izany fa ho afaka hiara-hiasa amin'ny sary ianao hahazoana ny fampisehoana ambony indrindra sy ny kalitao amin'izany, nefa tsy handany vola euro akory ianao.
Tsy mamerina ny sary fotsiny izy io, fa mamela anao mamorona zavaboary, mampiditra lahatsoratra, manao collage ... misy rehetra ho an'ny Android sy iOS. Raha ny marina dia avo dia avo ny isa azony ary tsy amin'ny findainao ihany no ahazoanao azy fa eo amin'ny solosainao ihany koa.
Ity rindrambaiko hanovana sary ity dia miompana amin'ny lafin'ny sary. Inona no azoko atao ho anao? Izy io dia afaka manitsy ny mombamomba ny sary hanova azy raha tsy tianao ilay ankehitriny. Saingy, ho fanampin'izay, manana ny fahaizana manome lalina, manome ny fahatsapana fa ny sary dia ao amin'ny 3D na mihetsika izy.
Toy ny teo aloha, dia azo jerena amin'ny iOS sy Android ary maimaim-poana koa. Ny fakana azy dia tsy handany vola na inona na inona ary tsy maharary mihitsy ny mampita azy amin'ny telefaona amin'izay mety hitranga.
Miaraka amin'ity rindrambaiko ity ho an'ny sary dia manana hevitra mifanohitra izahay. Ary fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android sy iOS izy io, saingy voafetra amin'ny zavatra azonao atao. Noho izany, miankina amin'ny tanjona tianao ho tratrarina rehefa mamerina manamboatra sary ny sary dia azonao atao ny misafidy izany na tsia.
Ny mazava dia izany dia iray amin'ireo fampiharana fanovana matihanina indrindra, ary io no ampiasain'ny manampahaizana manokana momba ny sary (na amin'ny solosaina na amin'ny finday na amin'ny takelaka).
Raha niresaka momba ny Adobe Lightroom izahay dia tsy afaka miala any Photoshop, satria raha tsy fantatrao dia misy ihany koa ny rindranasa hanovana sary avy amin'ny programa famerenana sary malaza indrindra.
Ity fampiharana ho an'ny Android sy iOS ity dia maimaim-poana ihany koa ary koa iray ahafahanao mamerina mamerina sary amin'ny sehatra matihanina. Raha ny marina, Google no namolavola azy ary manana safidy maro ianao hanovana ireo sary.
Ny tsara indrindra dia ny sary effects, izay azonao ampifandraisina amin'ny "Photoshop layer." Amin'izany no ahafahanao mamorona endrika hafa. Raha ny marina dia mamela anao hamorona sivana anao manokana izy io ary hampiasa fitaovana hafa, toy ny lahatsoratra, bala, frame, cropping sary sns.
Ity fampiharana hanovana sary ity dia mitovy amin'ny Instagram miaraka amin'ny sivana maro izay mahatonga ny sary ho toy ny nalain'ny matihanina marina.
Raha ny tena manokana dia mety ho an'ireo izay mitady sary kilasika na taloha, fa tsy midika izany hoe tsy manana sivana hafa hafa. Hanana fahatapahana, sisintany, vignette, lahatsoratra ... ianao.
Ianao ve mitady ny iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hanovana sary izay tsy mitovy amin'ny mahazatra? Avy eo andramo ity. Azo alaina ho an'ny iOS sy Android, miaraka aminy ianao dia hanova sary, amin'ny alàlan'ny sivana ananany, ho sary hosodoko sy sary.
Ohatra, azonao atao ny manao sary manana ny endrik'i Salvador Dalí, Picasso ...
Fampiharana fanovana sary: ​​Hypocam
Raha tsy loko ny zavatra tianao amin'ny fakana sary fa mainty sy fotsy, dia ity no iray amin'ireo fampiharana tsara indrindra hanovana sary. Ary izany dia natokana indrindra ho an'ny monochrome ary afaka mahita sary mainty sy fotsy ianao.
Ho fanampin'izany, noho ireo fitaovana ao anatiny dia azonao atao ny manome azy io ny fikasanao ho an'ny vokatra farany tsy mampino. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny Android sy iOS.
Ho an'ny iOS sy Android, ity fampiharana ity dia mifantoka amin'ny sakafo. Ary raha tsikaritrareo, rehefa mandeha any amin'ny trano fisakafoanana ny olona iray dia aroso lovia izy ireo, ny iray amin'ireo fanao mahazatra dia ny maka sary alohan'ny hametrahana ny fork ao anatiny (ary mitandrema amin'ny fanaovana izany nefa tsy maka sary henjana) .
Fa mazava ho azy, Raha mankany amin'ny "salon de salon" toa an'ity fampiharana ity ianao dia mahagaga kokoa ny vokany. Inona no ataon'ny app? Eny, mikarakara ny fampifanarahana ny sary izy io, amin'ny fametrahana jiro eo aminy, ny fanasongadinana ireo loko ary ny fanaovana azy ho toy ny hanim-py mendrika andriamanitra.
App hanovana sary: ​​Photo collage
Ity fampiharana ity dia tsy natao hanovana sary firy, izay azonao atao koa, fa ny fanaovana collage miaraka amin'izy ireo. Inona koa, manana maodely 5000 mahery Ary avy eo azonao atao ny manitsy azy ireo mifanaraka aminao, manova ny loko, mametraka sticker, soratra sns.
Azo ampiasaina amin'ny Android sy iOS izy io.
App hanovana sary: ​​Visage
Ary iray fampiharana hanovana sary selfie, izay matetika no tena fahita. Amin'izany no hanesoranao ny tsy fahalavorariana ka ho tonga lafatra ianao amin'ireny sary ireny: kitapo fanaovam-beloma ao ambanin'ny masonao, nify mavo, mony, sns. Amin'izany ianao dia hanalefaka ny hoditra, hanome azy hamirapiratra bebe kokoa ... Afaka manao makiazy mihitsy aza ianao!
Toy ireo teo aloha, azo jerena ihany koa amin'ny iOS sy Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » App hanovana sary: ​​ireto no tsara indrindra